यसकारण यी राशि भएकालाई आज शुभदिन : २०७६ चैत ७ गतेको राशिफल – Sagarmatha Online News Portal
यसकारण यी राशि भएकालाई आज शुभदिन : २०७६ चैत ७ गतेको राशिफल
आज वि.सं. २०७६ चैत ७गते शुक्रवार । तदनुसार इ.स. २०२० मार्च २० तारिख । ने.सं. ११४० चिल्लागा । चैत्र कृष्णपक्ष एकादशी, ८ः०६ उप्रान्त द्वादशी ।
शरीरमा कमजोरी तथा आलस्य अनुभूति हुनेछ । अध्ययनमा समय दिन नसकिएला । आर्थिक लाभ नहुने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला । सामूहिक काममा हात हाल्नुअघि विचार पुर्याउनुहोला । समस्या दर्साउँदा शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् । आस मारेको नतिजा अन्त्यमा सकारात्मक हुनेछ । तत्काल फाइदा नभए पनि स्रोत पहिचान गर्न सकिनेछ ।
सुन्दर पहिरन र भौतिक साधन जुटाउने समय छ । प्रियजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ । सुखदुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् । कामको चापबाट मुक्त रही विश्राम पाइनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा मन रमाउनेछ । विभिन्न सहयोग तथा उपहार प्राप्त भए पनि आफ्नै आलस्य गर्ने बानीले काममा पछि परिनेछ ।
पुरुषार्थले समाजमा स्थापित बनाउन सक्छ । रोकिएका काम बन्नाले मनग्गे लाभ हुनेछ । चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ । व्यापारलगायत आर्थिक लाभ हुने नयाँ योजना शुभारम्भ हुनेछ । विवाद तथा मुद्दाहरूमा आफ्नो पक्ष बलियो रहनेछ । प्रतिस्पर्धीहरूलाई सजिलै पछि पार्न सकिनेछ । भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ ।
परिस्थिति सामान्य अनुकूलै रहे पनि अस्वस्थताले काममा बाधा पुग्न सक्छ । घर–व्यवहारले पनि अल्मल्याउन सक्छ । नयाँ काम थाल्न समय पर्खनुपर्ला। अध्ययनमा त्यति समय दिन नसकिएला । तापनि मिहिनेतले अवसर दिलाउनेछ । गुरुजनको सहयोग र बुद्धिको उपयोगले आंशिक उपलब्धि हुनेछ । सन्तान वा अनुयायीको साथ, सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
हिस्सेदारसँग असमझदारी बढ्नाले पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ । अनावश्यक साइनो गाँस्नेहरूसँग सावधान रहनुहोला । ढिलासुस्तीले हातमा आएको मौका गुम्न सक्छ । स्थायी सम्पत्तिमा पनि विवाद आउन सक्छ । चौपाया तथा भूमिको माध्यमबाट सामान्य लाभ उठाउन सकिनेछ । विश्वासपात्रबाट धोका पाइनेछ र काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ ।
समयमा होस नपुग्नाले खर्च बढ्नेछ । ठूलो प्रयत्नले सामान्य उपलब्धि दिलाउनेछ । तर खर्च गरेर पनि त्यति फाइदा उठाउन नसकिएला । शुभचिन्तकहरूलाई बेवास्ता गर्दा दुःख पाइएला । परिवारजनबाट समेत टाढिनुपर्ला । प्रलोभन देखाउनेहरूले फसाउन सक्छन् । आफ्नै कमजोरीले विवाद निम्त्याउला । सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई फाइदा हुनेछ ।
मनग्गे धन आर्जन हुनेछ र विभिन्न स्रोत-साधन जुट्नेछन् । व्यापारमा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । सट्टापट्टा, लेनदेन आदिमा फाइदा हुनेछ । मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ । व्यापारमा थन्किएका वस्तु बिक्री हुनेछन् र अड्किएको रकम उठ्नेछ । आँटले काम बन्नेछ भने आम्दानीले उत्साह जगाउनेछ । श्रमको उचित मूल्यांकन हुनाले राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । राशिफमा जेसुकै भए पनि तपाई कर्ममा विश्वास गर्नुस । निरन्तर काममा लाग्नु भाग्य आफै तपाईको पाउमा पर्नेछ ।